Kordhi Dadaalkaaga Suuqgeynta 2022 ee Maamulka Oggolaanshaha | Martech Zone
2021 waxa uu ahaa mid aan la saadaalin karin sida 2020, maadaama arrimo badan oo cusub ay caqabad ku yihiin suuqyada tafaariiqda. Suuqgeeyayaashu waxay u baahan doonaan inay ahaadaan kuwo firfircoon oo ka jawaaba caqabadaha hore iyo kuwa cusub iyagoo isku dayaya inay wax badan ku qabtaan wax ka yar.
COVID-19 si aan leexleexad lahayn ayuu u beddelay habka ay dadku wax u ogaadaan oo wax uga iibsadaan - hadda ku dar xoogagga isku dhafan ee kala duwanaanshaha Omicron, khalkhalgelinta silsiladda sahayda iyo beddelka dareenka macaamiisha ee halxiraalaha horeba u adag. Dukaamada tafaariiqda ee raadinaya inay qabtaan baahida la soo rogay waxay la qabsanayaan iyagoo beddelaya wakhtiga ololahooda suuq-geyneed, yaraynta miisaaniyadaha xayeysiiska sababtoo ah caqabadaha saadka, ka guurista hal-abuurka gaarka ah ee badeecada oo ay qaataan "dhexdhexaad ah laakiin rajo leh".
Si kastaba ha ahaatee, ka hor intaysan suuqgeynyadu xitaa ka fikirin inay riixaan u soo diri emailkooda xiga ama ololayaasha qoraalka, waxay u baahan yihiin inay hubiyaan inay raacayaan hababka ugu wanaagsan ee isgaarsiinta macaamiisha iyo xeerarka maaraynta ogolaanshaha.
Waa maxay Maareynta Oggolaanshaha?
Maareynta ogolaanshaha waa habka loo isticmaalo in si otomaatig ah loogu dhaqmo ururinta oggolaanshahaaga, taasoo sahlaysa in la dhiso kalsoonida, lagu dhiirigaliyo macaamiisha inay doortaan oo ay ilaaliyaan u hoggaansanaanta qeexitaannada oggolaanshaha.
Waa maxay sababta Maareynta Oggolaanshaha Muhiim u tahay?
A madal maamulka ogolaanshaha (CMP) waa aalad hubisa u hoggaansanaanta shirkadda ee xeerarka oggolaanshaha isgaarsiinta ee khuseeya, sida kuwa GDPR iyo TCPA. CMP waa qalab ay shirkaduhu ama daabacayaashu u isticmaali karaan ururinta oggolaanshaha macaamilka. Waxa kale oo ay ka caawisaa maaraynta xogta iyo la wadaagida qoraalka iyo bixiyeyaasha adeegga iimaylka. Shabakad leh kumanaan booqdayaal maalinle ah ama shirkad soo diraysa tobanaan kun oo iimayl ama fariimo qoraal ah bishii, iyadoo la adeegsanayo CMP waxay fududaynaysaa ururinta ogolaanshaha iyadoo otomaatig ah habka. Taasi waxay ka dhigaysaa hab wax ku ool ah oo kharash-ku-ool ah oo lagu joogteeyo u hoggaansanaanta waxayna caawisaa in khadadka isgaadhsiinta furnaadaan.
Aad bay muhiim u tahay in suuqleydu ay la shaqeeyaan shuraakada la aamini karo ee ku takhasusay xalalka maaraynta oggolaanshaha, gaar ahaan in la dhiso oo laga faa'iidaysto goob tixgalinaysa sharciga dhammaan xukunnada khuseeya, oo ay ku jiraan Maraykanka, Kanada, EU iyo in ka badan. Haysashada nidaamkan oo kale waxa ay yaraynaysaa khatarta ah in lagu jebiyo shuruucda xogta wadan kasta ama xukun ay shirkadu ku leedahay rajooyin iyo macaamiil. Goobaha maanta horumarsan waxaa lagu dhisay u hogaansanaan-naqshad, iyadoo la hubinayo in marka xeerarku isbedelaan oo ay horumaraan, sidaas si la mid ah u hoggaansanaanta maaraynta oggolaanshaha saxda ah ee astaanta.
Maareynta ogolaanshaha saxda ah sidoo kale waa muhiim marka la eego horumarka ka fog isticmaalka xogta buskudka dhinac saddexaad iyo xagga ururinta xogta kooxda koowaad si toos ah macaamiisha.
Ka Guuritaanka Xogta Qaybta Saddexaad
Waxaa in muddo ah socday dagaal ku saabsan xaqa uu qofku u leeyahay sirta xogta. Intaa waxaa dheer, waxa jira is-barbar yaac gaar ah/ gaar ahaanshaha oo jira. Tani waxay tilmaamaysaa xaqiiqda ah in macaamiishu ay rabaan sirnimada xogta iyo inay ogaadaan in xogtoodu ay badbaado tahay. Si kastaba ha ahaatee, isla mar ahaantaana, waxaan ku nool nahay duni dhijitaalka ah oo dadka intooda badan waxay dareemaan culeyska dhammaan fariimaha ku soo dhacaya maalin kasta. Sidaa darteed, waxay sidoo kale rabaan fariimaha inay noqdaan kuwo la gaaryeelay oo khuseeya waxayna leeyihiin rajooyin ah in ganacsiyadu ay siin doonaan khibrado macmiil oo weyn.
Natiijo ahaan, waxaa jiray isbeddel aasaasi ah oo ku yimid habka shirkaduhu u ururiyaan una isticmaalaan xogta shakhsi ahaaneed. Shirkadaha iyo suuqgeynayaashu hadda waxay diiradda saarayaan soo-ururinta xogta kooxda koowaad. Qaabka xogtu waa macluumaadka macmiilku si xor ah oo ula kac ah ula wadaaga calaamad uu ku kalsoon yahay. Waxa ku jiri kara aragtiyo shaqsiyeed sida dookhyada, faallo celinta, macluumaadka astaanta guud, danaha, oggolaanshaha, iyo ujeeddada iibka.
Maadaama shirkaduhu ay ilaalinayaan hufnaan ku saabsan sababta ay u ururinayaan xogtan oo kale oo ay siiyaan macaamiisha qiimaha beddelka ay wadaagaan xogtooda, waxay kasbadaan kalsooni dheeraad ah macaamiishooda. Tani waxay kordhinaysaa rabitaankooda ah inay wadaagaan xog badan oo ay doortaan inay ka helaan isgaarsiin khuseeya sumadda.
Siyaabo kale oo ay shirkaduhu u kordhinayaan kalsoonida macaamiisha waa iyada oo la cusboonaysiinayo sahayda iyo cusboonaysiinta agabka ay xiisaynayaan wax iibsiga. Wada hadalkan daah-furnaanta leh ee ku saabsan cusboonaysiinta rarida wuxuu caawiyaa si loo maareeyo filashada saxda ah ee keenista, ama xitaa daahitaanka shixnadaha.
Qorshaynta Guusha Suuqgeynta 2022
Diirad saarista xeeladahan muhiim maaha oo kaliya maaraynta wareegtada wax iibsiga ee soo noqnoqda, laakiin sidoo kale qorshaynta hawlgalada suuq-geynta 2022 iyo balaadhinta farsamada casriga ah. Rubuca afraad sida caadiga ah waa wakhtiga ay summaduhu la kulmaan kooxahooda suuq-geyneed si loo hubiyo in isgaarsiintu ku socoto oo ay aqoonsadaan xeeladaha sanadka soo socda si loo wanaajiyo khibrada guud ee macaamiisha, loo kordhiyo dakhliga loona ilaaliyo khadadka isgaarsiineed mid furan.
Markaad tillaabooyinkan xisaabta ku dartid, adiga iyo astaantaada waxaad hubaal ahaan doontaan inaad tillaabo hore uga ahaan doontaan tartanka bilowga 2022!
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan PossibleNOW's madal maamulka ogolaanshaha:
Codso Muuqata NOW NOW
Tags: cmpmaaraynta oggolaanshahamadal maamulka ogolaanshahasoftware maamulka ogolaanshahaasturnaanta macaamiishacookiesKukiyada-koowaadsuurta gal haddaxeerarkacookies-ka eber